नौ वर्षमा साढे छ हजार डढेलो, यो वर्ष अत्याधिक – Kavreonline Patra
नयाँ बर्षमा माइत जान्छु भनेर हिडेकी महिला सम्पर्क बिहिन् !
किन हुरुक्कै हुन्छन युवतीहरु आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसंग – कारण यस्तो छ हेर्नुहोस्
८ बर्षको सानो कलिलो उमेरमा बेचिएर ४० बर्ष पछी आफ्नो जन्मथलो फर्किएकि राममायालाई किन गाउँलेहरुले एस्तो भने ? (भिडियो सहित)
मलेसियाबाट आयो दु,खद खबर : तेह्रथुमका १ जनाको सुतेकै अवस्थामा मृ,त्यु सेयर गरि परीवार सामु पुर्याउ।
हायसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो, बुवाआमा बचे, छोराको मृत्युु
मुख्य पृष्ठ /News/नौ वर्षमा साढे छ हजार डढेलो, यो वर्ष अत्याधिक
नौ वर्षमा साढे छ हजार डढेलो, यो वर्ष अत्याधिक
काठमाडौँ, २४ चैत। नेपालमा नौ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी यो वर्ष डढेलोका घटना भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा वि.सं. २०६९ कार्तिकदेखि २०७७ चैत्रसम्म छ हजार ४१५ डढेलोका घटना भएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार २०६९ सालमा ४० जिल्ला प्रभावित भएर ३७९ घटना भएकोमा २०७७ साल कार्तिकदेखि चैत्रसम्म छ महिनाको अवधिमा दुईहजार ७१३ घटना भएका छन् । सो अवधिमा ७३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।
२०७० सालमा डढेलोका घटना बढेर ४३ जिल्लासम्म फैलिए भने २६९ वटा डढेलो लागेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालमा डढेलोका घटनामा कमी आएको देखिएको पनि १०७ घटनासहित ३१ जिल्ला प्रभावित भए ।
यसैगरी, २०७२ सालमा (९८९) घटनासहित ६७ जिल्ला प्रभावित, २०७३ सालमा (३२४)सहित ५२ जिल्ला, २०७४ सालमा (६१७) घटनासहित ६४ जिल्ला, २०७५ मा ६३ जिल्लामा ८२९ डढेलो लागेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०७६ सालमा डढेलोका घटना कमि हुँदै ४० जिल्लामा मात्र प्रभावित भएको देखिन्छ । सो अवधिमा १८८ घटना देखिएकोमा २०७७ मा एक्कासि हवात्तै ७३ जिल्लामा प्रभावित भयो । डढेलोको घटना बढेर दुई हजार ७१३ सम्म पुगेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा अबको डेढ महिनासम्म नेपाल डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुहुँदै सम्बद्ध पक्ष सचेत हुन आग्रह गर्नुहुन्छ । लामो समय पानी नपरेर सुक्खा लागेको स्थानमा लागेको डढेलो सहजै अन्यत्र सर्ने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
अपहरित बालकको सकुशल उद्धार, बुबासहित मामाहरु पक्राउ
कुखुराबाट मानिसमा सर्‍यो बर्डफ्लु !